Akụkọ - Okwu Mmalite maka Iburu
Deep uzo bọl agba: mbụ amara dị ka otu ahiri radial bọl amị, ọ bụ ndị kasị ọtụtụ ebe ada Rolling agba. Ihe e ji mara ya bụ nkwụsi ike na esemokwu dị elu. Mgbe iburu naanị na-agba radial ibu, na kọntaktị n'akuku bụ efu. Mgbe miri uzo bọl amị nwere nnukwu radial nwechapụ, ọ nwere arụmọrụ nke angular kọntaktị amị na ike ibu nnukwu axial ibu.
Onwe kwado bọọlụ na-agba: na cylindrical onu na conical oghere abụọ di iche iche nke Ọdịdị, onu ihe nwere ígwè efere, sịntetik resin na na. Ihe e ji mara ya bụ na ụzọ mgbanaka mgbanaka dị gburugburu dị n'ụdị ma nwee ikike ịkwado onwe ya. Ọ nwere ike ịkwụ ụgwọ njehie kpatara site na etiti dị iche na ntụgharị ihu, mana nchepụta nke mgbanaka dị n'ime na nke dị n'elu ekwesịghị ịgafe ogo 3. Ọ kachasị na-ebu ibu radial ma nwee ike iburu obere ọrụ axial n'otu oge ahụ. Ngwunye axial nke shaft (shei) nwere oke n'ime njedebe nkwụsị, ma nwee ọrụ nke ịkwado onwe ya. Ọ nwere ike ịrụ ọrụ dịka ọnọdụ nke obere ọchịchọ nke akụkụ ime na mpụta. Okwesiri maka akụkụ ebe coaxiality nke oghere na-ebu oche enweghị ike ịkwụsi ike.
Cylindrical ala agba: ihe na-emegharị ọnụ bụ ihe na-agba ọsọ na-agba ọsọ nke cylindrical. The esịtidem Ọdịdị nke cylindrical ala agba adopts ndị yiri ndokwa nke rollers, na spacer ma ọ bụ spacer ngọngọ arụnyere n'etiti rollers, nke nwere ike igbochi uche nke ala ma ọ bụ esemokwu n'etiti rollers, na n'ụzọ dị irè gbochie mmụba nke n'usoro torque . Cylindrical ala na raceway bụ linear kọntaktị biarin. Nnukwu ibu ikike, tumadi ibu radial ibu. Nsogbu dị n’etiti ihe na-agagharị na ọgịrịga ya dị obere, nke kwesịrị ekwesị maka ntụgharị ọsọ ọsọ. Dika ma mgbanaka ahu nwere nkpuchi, enwere ike kewaa ya na uzo ndi ozo di iche iche dika Nu, NJ, NUP, N, NF, na uzo uzo uzo abuo dika NNU na NN. Nrụgide ahụ bụ usoro nwere ikewapụ nke mgbanaka dị n'ime na mgbanaka mpụga.
Agịga ala amị: ala-agba na cylindrical ala, ikwu ya dayameta, ala bụ mkpa na ogologo. Calleddị ihe akpọrọ akpọlaị roller. Ọ bụ ezie na ọ nwere obere obe-obe, nketa ahụ ka nwere ikike ibu dị elu. A na-eji eriri dị mkpụmkpụ na-adị ogologo ma dị ogologo (ihe ntụgharị D ≤ 5mm, L / D ≥ 2.5, l bụ ogologo ala). Ya mere, nhazi usoro radial bụ kọmpat. Mgbe nha nke dị n’ime na ikike ibu bụ otu ihe ahụ dị ka ụdị biarin ndị ọzọ, mpụta nke pere mpe bụ nke pekarịsịrị, nke kachasị adabara maka usoro nkwado nke nwere oke nwụnye radial. Nrụgide na-enweghị mgbanaka dị n'ime ma ọ bụ ihe nkedo agịga na mgbakọ onu nwere ike ịhọrọ dị ka ngwa dị iche iche. N'oge a, a na-eji elu akwụkwọ akụkọ na oghere oghere dị elu na-amị ihe dị ka oghere dị n'ime na n'èzí nke ntụgharị. Iji hụ na otu ibu ọrụ na ịrụ ọrụ dị ka iburu mgbanaka, ike, ịkpụzi ziri ezi na ịdị mma nke ọsọ ọsọ nke oghere ma ọ bụ oghere mpụta ga-adị ka nke mgbanaka ahụ. Kinddị agba a nwere ike iburu ibu radial.
Tapered ala agba: ọ bụ nke dị iche iche na-ebu. Mgbaaka ime na mpụta nke ebe a na-amị nwere okporo ụzọ awara awara. Nke a na ụdị agba nwere ike kere n'ime otu ahiri, abụọ n'usoro na anọ n'ahịrị tapered ala agba. Single n'usoro tapered ala agba nwere ike ibu radial ibu na axial jikọtara ibu ke otu direction. Mgbe eburu na-ebu ibu radial, ọ ga-emepụta akụrụngwa akụrụngwa, yabụ ọ chọrọ ntanye ọzọ nke nwere ike iburu ike axial na-abụghị nke itule. E jiri ya tụnyere nkuku kọntaktị kọntaktị, ikike ịgba dị ukwuu, njedebe ịgba dị ala, ọ nwere ike ibu ibu axial n'otu ụzọ, ma nwee ike ịkwụsị njedebe nke axial nke osisi ma ọ bụ shei n'otu ụzọ.
* Tụkwasị na ala agba: amị nwere ahịrị abụọ nke rollers, ọsọ ọsọ na-agba ọsọ na mgbanaka mpụga na ọsọ ọsọ ọsọ abụọ dị n'ime otu akụkụ ya na axis ahụ. Ọnọdụ dị gburugburu nke agba ọsọ mgbanaka mpụga dị na axis na-amị. Ya mere, ibugharị a bụ ihe nkedo nke onwe ya ma ọ bụghị ihe na-emetụ ya na njehie ndọtị dị n'etiti osisi ahụ na ebe a na-ebu ya, nke nwere ike ibute site na ihe ndị dị ka ntụgharị ihu. A na-emezi ihe ngosi dị gburugburu, nke nwere ike iburu ọ bụghị naanị nnukwu radial ibu, kamakwa ibu ọrụ axial na-arụ ọrụ na ụzọ abụọ.
Inye bọl agba:ọ bụ iji na-ebu inupụ ibu na elu na-agba, na-emi esịnede washer mgbanaka na raceway uzo nke bọl Rolling. N'ihi na mgbanaka ahụ dị n'ụdị fom, a na-ekewa bọọlụ agbatị ụzọ abụọ: ụdị mpempe akwụkwọ nke ala ala na ụdị nha anya nke aka. Ke adianade do, amị nwere ike ibu axial ibu ma ọ bụghị radial ibu. Ọ bụ naanị na ọdabara na akụkụ na ala na-agba na axial ibu.
Etinye onwe-kwado ala agba: amị bụ Olee ihe enyemaka ahụ dị ka onwe-kwado ala agba. Egwuregwu ịgba ọsọ nke mgbanaka ahụ na-agba gburugburu bụ akụkụ dị gburugburu na-adabere na isi ihe kwekọrọ na etiti etiti nke amị. Lerdị ụdị agba a bụ gburugburu. Ya mere, ọ nwere ọrụ na-akpaghị aka na-arụ ọrụ ma ọ naghị enwe mmetụta na coaxiality na shaft deflection. Kinddị agba a bụ nke a na-ejikarị na igwe egwu mmanụ, ígwè na ígwè ígwè, igwe na-emepụta hydraulic, moto kwụ ọtọ, ụgbọ mmiri na-agba mmiri, kreenu ụlọ elu, igwe nrụpụta, wdg.
Inye tapered ala amị: inupụ tapered ala agba nwere ike na-etolite a nnọọ kọmpat axial agba nhazi. Kinddị nke a nwere ike iburu ibu ọrụ axial dị arọ, enweghi mmetụta na-emetụta ibu, ma nwee ezigbo nkwụsi ike. Ebe ọ bụ na ihe na-agagharị na ihe nkedo na-agba ọsọ na-agba ọsọ, a na-emegharị ya, na nhazi, na-agbagharị generatrix na raceway generatrix nke washer na-agbakọta na amị